कथा : जुना क्रमश: ४ – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
कथा : जुना क्रमश: ४
४. बिहान सबेरै उठेर माम्लाबाजे आफ्नो नित्य पुजा आजामा लागे । बाजेले ज्वाइलाइ नुहाउन पानी तताइदिन छोरालाई अह्राउछ । जाडोको महिना बाहिर तुसारो परेर अरु जाडो बनाएको थियो । जुनाकि आमा भान्छामा गएर ज्वाइलाइ खाना बनाउन थाल्छिन । जुनाले तरकारी काटकुट गर्न सघाउछिन । चक्रपाणी नुवाइध्वाइ सकाएर ठुलो ओछ्यानमा चियाको चुस्की लिदै आगो तापेर मनमा कुरा खेलाउदै बसेका हुन्छन । मैले यो वाल बिबाह गरेर पाप गरे भन्ने भित्र कता कता उनको मनमा लागिरह्यो । बिहे त भैसक्यो । अब यो सुधार्न पनी सकिन्नथ्यो । बिहे भएकी केटिलाइ फेरी बिहे गर्दिने भन्ने कुरालाइ समाजले मान्यता पनी दिदैन । मन्टो झुकाएर बसेका चक्रपाणिलाइ सासु आमाले ज्वाइसाप भान्छा तयार भयो भनिन ।
झसंग हुदै हस भन्दै धोती फेर्न गए र भान्सामा पिर्का बिछ्याईएको थियो । उनि पिर्का बसेर थाल वरिपरि मन्त्र पढ्दै पानि घुमाए । एउटा सानो प्लेट मागेर भात दाल तरकारी समेत राखी श्रीकृष्ण अर्पण भन्दै थाल छेउमा राखे । चरेसको थालमा झिनियाको भात, चरेसको कचौरिमा ताजा घ्यू, चरेसकै कचौरामा दाल र पांच सातवटा सालका बौताहरुमा तरकारी अचार चटनी अनि गिलासमा दुध र अम्खोरामा पानी सबैलाइ चक्रपाणीले नियाले, पहाडमा आटो बिनाको जस्तै जिम्माला कहाँ पनी भान्सा हुदैनन्थ्यो । भलै दुध घ्यु गोरसको कमि हुन्थेन । माम्ला बाजेको भान्सामा अर्को कसौडीमा मकैको आटो पाकेकै थियो । यसो हेरेर सासुसंग अलिकति आटो पनी थालमा राखिदिनोस न । अलिकति यो भात कम गरि दिनु है भने । तर सासुले ज्वाइलाइ पहिलो पटक आएको ज्वाइलाइ मैले त मरिगए आटो खुवाएर पठाउन्न भनेर मान्दै मानिनन । उनले खाना खान शुरु गरे । खाना खाइसकेपछि चुठाउन आम्खोरामा पानि लिएर बोधराज पछि पछि गएर पानी खन्याई दिए । जेठान भए पनी उमेरमा आठ दश बर्ष कान्छा थिए । भो भो जेठान भन्दै आफै अम्खोरा समात्न खोज्दै थिए, चक्रपाणीले । तर बोधराजले दिदै दिएनन ।
चक्रपाणी घर जान ढिलो गरे रात पर्ने हुनाले घर जाने तरखर गर्न लागे । त्यतिन्जेल भरिया आएका दाइ पनी खाना खाएर तयार भैसकेका थिए । मामला बाजे र बजैले ज्वाइलाइ रातो टिका लगाई दिएर दक्षिणा कोटको गोजीमा राखी दिए । ढकनिको अर्नी र दुधको कुराउनी र सेल रोटीको पोको बनाएर भरियाको डोकोमा राखी दिइन सासु आमाले ।
मामला बुढाले ज्वाइको खुट्टामा ढोगेर, हाम्री बाल्ख छोरी जुनालाई तपाइलाइ जल खाएर दान गरेका छौ । माया गरेर पाल्नु होला । दुइ दुइवटा झडकेला छोरा छन् । यो केटा केटि नै छ । छोरी अलि गरिखाने नहुन्जेल यही राख्छम । त्यतिन्जेल उताको ब्यबस्था मिलाउनु होला । अहिले जुनालाई लगेर झन् यसैको सुसार गर्न पर्ला ? चक्रपाणीलाइ मनासिव लाग्छ र उनले ससुरालाई आस्वस्थ बनाउदै भने : म जुनालाइ मैले छोडेर जान्छु र उपयुक्त समयमा लिन आउने छु । तपाइले दान दिएकि छोरी अब मेरी हुन्, यिनलाई नासोको रुपमा राखिदिनु होला । भन्दै बिदा भए । जुना तिम्रो काञ्छॊ भिनाजुलाई बिदा गर्न आउदिनौ । भन्दै बोलाए । तर जुना चक्रपाणीले बोलाउदा आउन मानिनन । …….
कथा: जुना क्रमश : ३.
कथा : जुना क्रमश: ५